News | पार्टी एकता
News | Tag: पार्टी एकता
बर्दिवास । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरण अब कसैको इच्छा र लहडले नटर्ने बताएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा आज नेकपा (एमाले) बर्दिवास नगर कमिटीले आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक अवस्था र कार्यभार’ विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले अब बाहिरी शक्ति मात्र नभई एमाले र माओवादी केन्द्रकै कुनै नेताको लहडले पनि एकीकरण नटर्ने बताए ।
एमाले–माओवादी एकता ९ गते निश्चित , आज निर्णायक वार्ता
काठमाडौँ । लामो समयदेखि हुने भनिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र्रबीच पार्टी एकताबारे आज निर्णायक वार्ता हुने भएको छ । वार्तामा एकीकृत पार्टीमा दुवै दलको सहभागिता अनुपातलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
दुवै पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालले मंगलबार केन्द्रीय एकता संयोजन समितिमा निर्णायक वार्ता हुने बताएका हुन्। वार्ताले वैशाख ९ मा नै एकता हुने वातावरण तय गर्ने जनाइएको छ ।
अन्योलमा एमाले–माओवादी एकताः एमालेमा अहंकार, माओवादीमा त्रास
काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर बैशाख ९ गते एमाले र माओवादीबीच हुने भनिएको पार्टी एकता अन्योलमा परेको छ । योसँगै पार्टी एकता नै टर्ने त होइन ? भन्ने जनशंका पनि बढेको छ । विभिन्न बहानामा पार्टी एकताको मिति पटक–पटक सर्नु र नेताहरुबीच असन्तुष्टि बढ्नुले यो शंका पनि बढेको हो ।
एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुपूर्व नै पार्टी एकता गर्ने भनिएको थियो । तर समय अभाव भन्दै मिति सारिएको थियो । यो बीचमा दुई दलका नेताले एकता प्रक्रयालाई थप अघि बढाउनुको साटो झन् दूरी बढ्ने अभिव्यक्ति दिए ।
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सकियो, एमाले–माओवादी एकता बैशाख ९ गते
काठमाडौं । एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सकिएको छ । मंगलबारको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदल र विधान मस्यौदा कार्यदलले आ–आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै नेताहरुले बैशाख ९ मा पार्टी एकता घोषणा गर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
पार्टी एकताबारे प्रचण्डको नयाँ खुलासाः खोजे बराबर हैसियत
काठमाडौं । पार्टी एकताका बारेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख खोलेका छन् । ७०–३० को भागवण्डाका आधारमा नभई समान हैसियतमा मात्रै एकता गर्न सकिने अध्यक्ष प्रचण्डको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि नै पार्टी एकता गर्न इच्छुक देखिएका छन् । यही प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई राखेका थिए ।
एमाले–माओवादी पार्टी एकताको साइत चैत २२ मा जुर्ला त ?
एमाले र माओवादी
काठमाडौं । आगामी चैत २२ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुने भएको छ । निकै लामो प्रतिक्षा, छलफल र बहसपछि एमाले माओवादीबीच पार्टी एकता हुने भएको हो ।
यसअघि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर वैशाख ९ गते एकता घोषणा गर्ने तयारी थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण
एमाले–माओवादीले पार्टी एकताको मिति टुंगो लगायो, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता घोषणाले अन्तिम रुप पाउने भएको छ । दुवै पार्टीको एकता आगामी चैत २२ गते हुने भएको हो ।
कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापनाको अवसर पारी दुवै दलले एकता घोषणा गर्ने तयारी गर्ने बुझिएको छ ।
पार्टी एकताको विधान बनाउन एमाले–माओवादी बैठक बस्दै, कस्तो बन्दैछ विधान ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि आन्तरिक विधान बनाउन गठन भएको कार्यदलको बैठक बस्दैछ । एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो । बैठक मंगलबार दिउँसोका लागि डाकिएको छ । बैठकले दुई पार्टी एकीकरणको मापदण्डसहितको कार्यतालिका निर्माण गर्ने छ ।
पार्टी केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका कमिटीहरु एकीकरण गर्न यो कार्यदलले ठोस आधार तय गर्नेछ ।
एमाले–माओवादी एकताः सांगठनिक स्वरुपबारे आज टुंगो लाग्ने
काठमाडौं । एमाले र माओवादीले सरकार विस्तार र पार्टी एकतालाई टुंग्याउनेगरी छलफल अघि बढाउने भएका छन् । शनिवार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा यी दुवै विषयमा कुरा भएको थियो । आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच थप छलफल हुनेछ ।
माओवादीले सरकारको पूर्णता र पार्टी एकतालाई प्याकेजमै टुंग्याउनु पर्ने वताउँदै आएको छ । उसले भनेको प्याकेजमा नेता कार्यकर्ताको पद बाँडफाँडले प्राथमिकता पाएको छ ।
एमाले–माओवादी एकताः आजै घोषणाको प्रयास !
काठमाडौं, फागुन २ । बुधबार पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । ललितपुरको मानभवनमा केही समयअघि सकिएको बैठकले सकभर बुधबार नै पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारी गरेको एमालेका एक नेताले उज्यालोलाई जानकारी दिए । दुर्ई नेताबीच सहमति बनिसकेको र त्यो सहमतिलाई दुई पार्टीबाट अनुमोदन गराउने काम मात्रै बाँकी रहेको पनि ती नेताले जानकारी दिएका छन् ।
दाहालको घुर्कीपछि ओली आत्तिएका हुन् ?
काठमाडौं, फागुन १ । शनिबार गृह जिल्ला चितवन पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुर्कीको भाषामा भने, ‘देशलाई अप्ठेरो पर्छ भने फड्को मार्न तयार छु ।’ अनि, चितवनबाट काठमाडौं फर्कने बेला सञ्चारकर्मीसित भने, ‘पार्टी एकतामा अझै ढिला गरियो भने निर्मम निर्णय गर्न बाध्य हुनेछु ।’
उनका यी भनाईपछि एमाले नेताहरुले पनि चेतावनीपूर्ण भाषा बोले । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘फड्को मार्न खोज्दा झन् फसिएला नि ।’ त्यस्तै अरु माओवादी नेताले पनि सम्मानजन एकता नभए बामगठबन्धन टुट्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।